Magaalada kismaayo ayaa waxaa lagu soo bandhigay meedad la sheegay in ay katirsanaayeen al-shabaab(Daawo Sawirada) – STAR FM SOMALIA
Wararka ka imaanaya Magaalada Kismaayo ee xarunta Gobolka Jubbada hoose, ayaa sheegaya in Magaaladaasi lagu soo bandhigay meydadka Afar ruux oo Shabaab ka tirsan.
Afarta ruux ee Shabaabka ka tirsan ee la soo bandhigay ayaa la sheegay inay ku dhinteen duqeymo xalay Diyaarado dagaal ay ka fuliyeen deegaanka Buulo gaduud oo Qiyaastii 30-KM u jirta Magaalada Kismaayo.
Wararka waxa ay sheegayaan in meydadkaan ay ka muuqdaan rasaastii lagu dilay iyo waxyeelo kale oo rasaas u badan.
Saraakiisha ciidamada ammaanka Jubbaland ayaa sheegay inay jiraan kuwa kale oo dhaawac ah oo dhanka Duurka u cararay, balse ay socdaan howlgalo lagu baadigoobayo.
Diyaarado dagaal ayaa xalay duqeeyay Deegaanka Buulo gaduud oo Shabaab ay ku sugan yihiin, inkastoo aanan la ogeyn halka laga leeyahay Diyaaradaha Duqeynta fuliyay, balse warar soo baxaya ay sheegayaan in dalka Mareykanka laga leeyahay.
Saraakiisha ciidamada Maamulka Jubbaland ayaa sheegay Khasaaraha Shabaabka ka soo gaaray Duqeymahaasi inay intaan ka badan yihiin, laakiin hada la helay kaliya meydadka Afartaasi ruux.